ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: ချောမွေ့သောနောက်ဆုံး Buttercream - Sugar Geek ပြပွဲ - ဘလော့ဂ်
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: ချောမွေ့သောနောက်ဆုံး Buttercream ၏ကုတ်အင်္ကျီ
သင့်ရဲ့ buttercream အပေါ်ချွန်ထက်အနားရဖို့ကိုဘယ်လို
ဒါကြောင့်မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ buttercream ၏နောက်ဆုံးဘုနျးကွီးသောကုတ်အင်္ကျီ! ယနေ့သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးမည်၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေအခြေခံချောမွေ့သောအခြေခံချောမွေ့သောနောက်ဆုံးအင်္ကျီကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ကြားသွားမည်။ သငျသညျဤတ ဦး တည်းမှ ဦး ဆောင်ယခင်ခြေလှမ်းများအားလုံးလွဲချော်ခဲ့လျှင်, ဤအချက်ရဖို့ဘယ်လိုပေါ်ဖမ်းမိရရန်အခြားကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သေချာပါ!
အစအန -coated နှင့်အေးကိတ်မုန့်
သင့်ရဲ့အစအန coated ကိတ်မုန့်ခိုင်မြဲအေးနှင့်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ရှိသည်။
များစွာသော buttercream ကိုသင်၏ကိတ်မုန့်ထိပ်တွင်ထည့်ပါ။ ဤတွင် Liz သူမ၏အသုံးပြုနေသည် လွယ်ကူသော Buttercream စာရွက် ။
ထိပ်ပေါ်ရှိ buttercream ကိုချောမွေ့စေရန်သင်၏ offset spatula ကိုစတင်အသုံးပြုပါ။ သင့်ရဲ့ Spatula level ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားပါ။ သင့်ရဲ့ထိပ်ဆုံးက level နှင့်တတ်နိုင်သမျှချောမွေ့သည်အထိလုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်နှစ်ဖက်ဆီကိုနောက်ထပ်ရက်ရောတဲ့ buttercream ကိုထပ်ထည့်ပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့ငါတို့အများစုကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရန်မကြာမီသိမ်းလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ buttercream ရဲ့ဘေးထွက်များကိုချောချောမွေ့မွေ့စတင်ရန် Liz ကဲ့သို့ခုံတန်းလျားခြစ်ခြစ်သို့မဟုတ်ဆန်းသစ်သောသကြားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီခြစ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ကိတ်မုန့်ကနေ 90 ဒီဂရီထောင့်မှာမဟုတ်ဘဲသင်တို့ဆီသို့အနည်းငယ်ထောင့်ဖြစ်အောင်သင့်ရဲ့ခြစ်ကိုကိုင်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ turntable လှည့်နေစဉ်သင့် buttercream ချောချောမွေ့စွာခြစ်ပါကသင်၏ခြစ်ရာအဆင့်နှင့်ဖြောင့်နေစေရန်သေချာစေသည်။ သင်သွားသည့်အခါပိုလျှံသော buttercream ကိုပန်းကန်ထဲသို့ချရေးပါ။
ဤတွင်သင်ခြစ်သင့်ရှုထောင့်ကနေမှာဖြစ်သင့်မှန်ကန်သောထောင့်မြင်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျအောက်မှာသင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ဘုတ်အဖွဲ့ရောက်ရှိသည်နှင့်နှစ်ဖက်တော်တော်လေးကြည့်ရှုသည်အထိခြစ်ရာကိုဆက်လက်! ဒီနေရာမှာဒီမှာအပေါက်အနည်းငယ်ရှိရင်ငါတို့နောက်မှပြန်ပြင်မှာအဆင်ပြေပါတယ်။
သင်၏သန့်ရှင်းသော offset spatula ကိုယူပြီးသင်၏အပေါ်ဆုံးအနားများကိုချောမွေ့စေပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်ရရှိစေရန်ပိုလျှံသော buttercream ကိုသင်၏ spatula မှဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။
သင်၏ကိတ်မုန့်သည်ကောင်းမွန်။ ခိုင်မာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကျန်ရှိနေသေးသောကွက်လပ်များသို့မဟုတ်အပေါက်များကိုဖြည့်ရန်အတွက်သင်၏ထိပ်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနောက်ဆုံးပါးလွှာသောထောပတ်ချောင်းတစ်ချောင်းထည့်ပါ။
ဒဏ္ာရီ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုမြတ်နိုးလျှင်သင်၏ buttercream ပုံသဏ္whatာန်သည်အရေးမကြီးပါ။
အမှန်တရား - မင်းရဲ့ buttercream ကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့ fondant ကပိုပြီးချောမွေ့စေမှာပါ။ သင်၏ fondant အတွက်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးရန်အချိန်ယူပါ။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောမစုံလင်မှုများကိုပြသလိမ့်မည်။
သင်၏သန့်ရှင်းသော offset spatula ကိုထပ်မံ သုံး၍ buttercream ၏ထိပ်စွန်းများတွင်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိသည်။ ဤသည်နောက်ဆုံးအင်္ကျီဖြစ်စဉ်ကိုသင်အတော်လေးအသစ်ဖြစ်လျှင်အထူးသဖြင့်အချိန်အတော်အတန်ယူနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်ပါ၊ ကောင်းသောနည်းစနစ်များကိုလေ့ကျင့်ပါ၊ မြန်နှုန်းနောက်ကျပါလိမ့်မည်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့သည်သင်ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုခုရှိသင့်! fondant ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့အဆင်သင့်ကိတ်မုန့်။ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကို fondant ဖြင့်မဖုံးထားပါက၎င်းသည်အပြစ်ကင်းစင်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်အချိန်ပိုယူလိုသည်။
ယခုသင်ကဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်သကဲ့သို့နီးပါးအဖြစ်ကြောက်စရာခဲ့သလဲ မင်းလုပ်နိုင်တယ်! သည်းခံခြင်းကအဓိကသော့ချက်ပဲ။ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက Sugar Geek အဖွဲ့သည်အမြဲတမ်းဤနေရာတွင်ကူညီသည်။ နောက်အပတ်မှာ Upside Down Method လို့ခေါ်တဲ့ buttercream ရဲ့နောက်ဆုံးကုတ်အင်္ကျီအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုကိုလေ့လာပါမည်။ ဤနည်းလမ်းသည်ကြီးမားသောအချိန်နှင့်စိတ်ပျက်စရာများကိုသက်သာစေပြီးရလဒ်ကောင်းတစ်ခုကိုရရှိစေနိုင်သည်။ သို့သော်လူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြလုပ်ခဲ့သည့်အခြေခံနည်းလမ်းကိုစွဲစွဲမြဲမြဲလိုက်လိုလျှင်၎င်းသည်မှားသည်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်ရှေးရှေးအဘယ်သူမျှမတရားသဖြင့်စီရင်။
Shannon ပက်ထရစ် Mayes
Shannon သည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည် SweetArt ကိတ်မုန့်ကုမ္ပဏီ Lovell, Wyoming ၌တည်၏။ ယူကျု့ချန်နယ်၏အိမ်ရှင် ချိုမြိန် , Shannon ကိုမဂ္ဂဇင်းတော်တော်များများမှာဖော်ပြထားတယ် ကိတ်မုန့်မာစတာ ။ ဘလော့ရေးသူနှင့် Sugar Geek Show တွင်ပါဝင်သူ။
ဝဘ်ဆိုက် Facebook Instagram
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: Tool ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရှိရမည်
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: Airless အာကာသ Buttercream
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: level နှင့် Torting
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: ဖြည့်ခြင်းနှင့် Crumb Coating
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: ကိတ်မုန့် Blowouts ရှောင်ရှား
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: Fondant အတွက်ကိတ်မုန့်ဖုံးအုပ်
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: Sharp Edges ရဖို့ကိုဘယ်လို
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: ဘယ်လို Panel ကိုမှ
ကိတ်မုန့်အလှဆင်အခြေခံ: ကိတ်မုန့် stacking
ခြစ်ရာကနေ vanilla အလွှာကိတ်မုန့်စာရွက်